VLC 4, maitiro ekuiyedza muLinux pasina kutora chero njodzi | Linux Vakapindwa muropa
VLC, mutambi uyo asingade kuiswa. Nzvimbo yese. Iyo yakanyanya kunaka sarudzo kune vazhinji vashandisi. Asi parizvino ine mufananidzo wandingati hauchashandi. Ichokwadi kuti iwe unogona kuwedzera "makanda" uye ese marudzi ekushandurwa, asi icho chinhu chatinofanira kuzviitira pachedu, tisingataure kuti nzira yakanakisa yekusasangana nekutadza kusingatarisirwe ndeyekuisiya sezvainouya default. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoshandura mufananidzo we VideoLan mutambi, iwe ungazomira kana kuvhurwa kwe VLC 4 iva mukuru.
Pakutanga gore rino, VideoLan yakaunza iyo mutambi wako wekutanga wekutanga kusimudzira kumeso mumakore mazhinji, mazhinji. Shanduko iyoyo ichauya muVLC Series 4, vhezheni 4.0 yayo iyo parizvino iri kuvandudzwa. Inogona kuiswa nekuwedzera repamutemo repamutemo, asi kuzviita nenzira iyi tichave tichigadzirisa mutambi watakaisa nekumisikidza uye, kana chimwe chinhu chikatadza uye isu tichida kudzokera kumashure, zvinonyanya kuitika kuti isu tichawana kukundikana. Nzira yakanakisa yekuyedza beta yayo paLinux ndeyekuisa yayo Snap package.
Isa iyo VLC 4 beta kubva kune yayo Snap package
Isa VLC 4 kubva kune yako snap package Zvinogona kuve zvakapusa sekumhanyisa rairo, asi haina kufanana paneese kugoverwa kweLinux. Mune mamwe, kuti uwane mamwe marudzi eSnap mapakeji / shanduro dzechirongwa, isu tichafanirwa kuwana iyo Snap Store. Matanho ekutevera uye atinozoona kuti vanoshanda pane ese akatsigirwa kugoverwa kweLinux anotevera:
Isu tinonyoresa kuScap Store. Kuti uite izvi, zvakakwana kuve / kunyoresa mukati Ubuntu One.
Tevere, isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana izvo zvataurwa pamusoro zvanyorwa uye password yedu yemutungamiri yapinda, zvinotibvunza email. Isu tinosuma iyo yeedu Ubuntu Ubuntu account uye tinya Enter.
Iye zvino zvichatikumbira isu password. Isu tinoisa uye tinya Enter zvakare. Izvo zvichatiudza kuti isu takawana zvinobudirira.
Iye zvino unongoda kuisa iyo package:
Kana maitiro apera, VLC 4 Beta ichave yatove kuiswa pane yedu system. Dai isu tanga tatova neVLC yakaiswa, tichava neshanduro mbiri: iyo vhezheni yataive takaisa uye iyo vhezheni yatichangoisa. Zvichienderana nehurongwa hwekushandisa hwatiri kushandisa, mumenu yekushandisa taigona kuona macone maviri akafanana, saka hatizomboziva kuti ndeipi vhezheni kusvikira tavhura.
Ramba uchifunga kuti isu tichave tichishandisa software muchikamu chekuyedza. Izvo hazvishande zvakaringana sezvazvinofanira kuita, asi isu tinokwanisa kutarisa kune yayo nyowani mufananidzo uye zvese mikana iyo inotevera inotevera kuvhurwa kweVideoLan player ichatipa. Ichave yakakosha zvekuti ungangoishandisa seyako raibhurari yemumhanzi nekutadza. Wakambozviedza here? Zvakadii neVLC 4?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » VLC 4, maitiro ekuiyedza paLinux pasina kutora chero njodzi